Atletico Madrid oo la soo wareegtay xiddig
Kooxda Atletico Madrid ayaa shaacisay lambarka uu qaadan doono saxiixa cusub ee Moussa Dembele oo ka socda kooxda Lyon.
Weeraryahanka reer France waxaa iibsaday Atletico si uu u buuxiyo booska uu ka tagay Diego Costa qandaraaskiisa, kaasoo dhammaaday bishii Janaayo.
Xilli ciyaareedka 2020/21, maamulka kooxdu waxay u baahnaan doonaan inay ku guuleystaan ​​horyaalnimada lix sano ka dib kii ugu dambeeyay, ayna sii wadaan dib-u-habeynta oo ay sii xoojiyaan danahooda gaarka ah ee haysta kooxaha koobka ka haya Real Madrid iyo Barcelona.
Kooxda ka dhisan Madrid ayaa la soo wareegtay weeraryahanka reer France Moussa Dembele, kaasoo lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Chelsea, Manchester United iyo Arsenal, imaatinka Wanda Metropolitano ayaa ku soo kordhin doonta Atletico tayo iyo awood cusub.
Weeraryahankan oo ka garab ciyaari doona Luis Suarez ayaa waxaa maanta soo bandhigtay kooxda Atletico Madrid.
Dembele ayaan ka mid noqon doonin kooxda khamiista wuxuuna tababar la qaadan doonaa si ka duwan kooxda inteeda kale, laakiin maalinta jimcaha ayuu si buuxda uga qayb qaadan doonaa kooxda tababarkiisii ​​ugu horeeyay.
Kulankiisii ​​ugu horreeyay wuxuu la ciyaarayaa Eibar Khamiista soo socota.
Moussa Dembele ayaa xiran doona funaanada Diego Costa ee lambarka 19-aad.
Si kastaba ha noqotee, ku biirista Dembele ee Atletico waa amaah inta ka dhiman xilli ciyaareedkaan, laakiin kooxda reer Spain ayaa si rasmi ah ula wareegi doonta xagaaga marka uu dhaqan galo heshiiskiisa.